jeudi, 03 octobre 2019 20:33
Bac Ambohimangakely: Miasa ny labozia
Amin'ny 9 ora alina no ho vita ny adina Siansa ho an'ny série D, raha nanomboka tamin'ny 6 ora hariva, labozia no manazava.
jeudi, 03 octobre 2019 17:59
Ambaratonga faharoa: Lisea miisa 214 hanaovana andrana ny fandaharam-pianarana vaovao ho an’ny T10 sy T11
Hisy fanavahana mazava ny sokajy « Littéraire » « Scientifique » ary ny OSE (Organisation, Société et Economie) satria tsy mifanaraka intsony amin’ny filan’ny tontolon’ny asa misy eto amintsika ny fandaharam-pianarana ampiasaina ankehitriny.
Nivoitra io nandritra ny atrikasa fankatoavana ny fandaharam-pianarana vaovao ho an’ny T10 sy T11 eny amin’ny ambaratonga faharoa, natao ny marainan’ny 01 oktobra 2019 tetsy amin’ny efitrano malalaky ny Fanabeazam-pirenena, ny Fampianarana ara-Teknika sy arak'Asa etsy Anosy Antananarivo.
jeudi, 03 octobre 2019 17:51
Herinaratra « hybride »: Hisitraka ny tanànan’i Morondava, Antalaha, Vohémar ary Sambava
Hananganana tobim-pamokarana herinaratra « hybride » ao amin'ny Disitrikan'i Morondava, Antalaha, Vohémar ary Sambava. Manana tanjaka 15MW ireo rehetra ireo. Natao androany 3 oktobra 2019 ny fifanaovan-tsonia teo amin’ny Ministeran’ny Angovo, ny Rano ary ny Akoranafo, ny Jirama ary ny orinasa GES momba izany.
Tafiditra ao anatin'ny paikady fampidinana ny saran'ny famokarana herinaratra ity tetikasa ity, ary hatomboka amin'ny faran'ny volana oktobra 2019 ny asa.
jeudi, 03 octobre 2019 17:34
Festival Angaredona: Nanomboka androany ny andiany faha 15
Raikitra ary nanomboka androany 3 oktobra 2019 eto Antsirabe ny Festival Angaredona, andiany faha-15. Nosantarina tamin'ny fizarana mari-boninahitra ho an'ireo mpanankanto miisa 51 ny hetsika. Misy mpitendry mozika, mpanoratra sy mpikambary ary mpanao hosodoko isan-karazany izy ireo.
Ireo izay nangataka, no nomena mari-boninahitra, rehefa nahafeno ny fepetra, fa tsy ny ministeran’ny serasera sy kolontsaina no nifantina ireo notolorana izany.
Tonga teto Antsirabe ny minisitry ny serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo nanolotra izany no sady nanokatra ny « Festival Angaredona ».
jeudi, 03 octobre 2019 17:31
Fivoriana iraisam-pirenena: Hisesy ny fandraisana anjaran’i Madagasikara
Tapaka nandritra ny filankevitry ny minisitra omaly fa handray anjara amin'ny fihaonana an-tampony voalohany « Russie-Afrique » hatao any Sotchi Rosia i Madagasikara ny 23 sy 24 oktobra 2019.
Handray anjara amin'ny fikaonan-doha faha-enina handinihana ny fampiasana ny tahirimbola manerantany entina hiadiana amin'ny VIH SIDA, ny raboka ary ny tazomoka, hatao any Lyon Frantsa ihany koa ny 09 sy 10 oktobra 2019.
Ary amin’ny fivorian'ny vondron'asan'ny Firenena Mikambana (ONU) andiany faha-34 handinihana ny fanajana ny zon'olombelona maneran-tany, sy hankatoavana ny tatitra nasionaly faha-3 eo anatrehan'ny Filankevitry ny zon'olombelona, hatao ny 11 sy 14 novambra 2019 any amin'ny Ofisin'ny Firenena Mikambana any Genève, Suisse.
jeudi, 03 octobre 2019 17:20
Antsirabe: Tamin'ny 12 ora vao nanomboka ny laza adina frantsay
Nisavorovoro ireo ray aman-drenin'ny mpianatra hanala bakalorea teto Antsirabe renivohitr’i Vakinankaratra satria tara ora maro ny fanombohan'ny fanadinana androany maraina. Tamin'ny 10 ora sy sasany vao nigadona ny laza adina no nahatonga izany.
Nomena 30 minitra hivoahana hitadiavana sakafo ireo mpiadina dia nasaina niditra kanefa ny sakafon'ireo lavitra izay aterin'ny ray aman-dreniny tsy mbola tonga tamin'izany. Nisy mihitsy no nisendaotra noho izany satria tsy nahafantatra ny fiovana ny ankamaroan’ireo ray aman-dreny fa nahandro sakafo tany an-trano.
Rehefa tonga teo anoloan'ny CEG Soamalaza sy ny Kolejy Immaculée misy ny foibem-panadinana vao tankina satria tsy nahazo nivoaka intsony ireo mpianatra misakafo.
Tamin’ny mitatao vovonana vao nanomboka ny laza adina frantsay teto Antsirabe.
Kitra - CHAN 2020: Hiatrika lalao ara-piralahina roa ny Barea
Anatin’ny fampivondronana eny amin'ny CTN Carion ireo mpilalao mandrafitra ny Barea CHAN. Hisy lalao ara-piralahina roa hitsapana ny mpilalao sy hanamafisana ny fahaiza-miaraka mialoha ny ho fiatrehana ny lalao miverina izay hifanandrinan’i Madagasikara amin'i Namibia ny 19 oktobra 2019.
Hatao eo amin’ny Kianjaben’i Mahamasina ireo lalao ara-piralahina, hifandonan’ny Barea CHAN amin’ny Zanakala ny alahady 06 oktobra, avy eo ny ekipa voafantina Analamanga ny sabotsy 12 oktobra 2019.
jeudi, 03 octobre 2019 14:34
Moramanga: Tara fanombohana ny adina bakalôrea androany
Fiandrasana laza adiny no voalaza fa nitarika ny fahataran’ny fanombohan’ny adina bakalôrea androany tamin’ireo foibem-panadinana miisa efatra eto Moramanga.
jeudi, 03 octobre 2019 14:29
Amborovy Mahajanga: Nalaina eo ny eo ny tanin'olona hidirana amin'ny toerana anaovana building
Tetikasan'ny Filoham-pirenena ny hanao building amin'ny velirano nataony, ka isan'izany ity kasaina ahorina eto Amborovy eo amin'ny tanin'ny ASECNA ity.